Hlala u-Skin Skating Exercises
Indlela Yokuqinisa Imilenze Yakho kunye Nemisipha Nge-Sit Spin
Umzobo wee-skaters kufuneka usebenze kwiqhwa kunye neqhwa ukuze uncede ukuqinisa imilenze yabo. Ukuqinisa imisipha yethanga, izihlunu zethole, kunye nomxholo uya kunceda ukuba i-skater yenza ngcono i- spins . Eli nqaku linika amanyathelo okufeza loo njongo.
Ziqhelanisa ukuguqa ngamadolo kwaye uphume kwiqhwa.
Yenza ezininzi izikwere kunye nokudibanisa ngangokunokwenzeka. Ukuba unako ukudubula amadada, yenza oku. Sebenza ngokuguqa amadolo nemilenze imihla ngemihla. Yonke imihla, sebenzela ukuzama ukuhla kwezantsi.
Ukwenza imiphunga kuya kunceda ukuqinisa imilenze ye-skater.
Njengama-squats kunye ne-dips, indawo yokuzimela ingenziwa kwi-ice.
Kubalulekile ukuba i-skater iphinde isebenze ekuqiniseni imisipha yayo.
Izenzo zokuqinisa izinto ezifunekayo kufuneka zenziwe ngaphandle kweqhwa. Ukuzivocavoca okuya kukunceda i-skater ibe namandla ngakumbi ukuba i-spin yokuhlala iquka i-presses zangasese, i-crunches yomzimba, iplank, i-push-ups, nomlenze uphakamisa.
Ukuhlala uhlahlela ngokuphindaphindiweyo kukunceda ukuqinisa imilenze yamakhredithi, amadolo, amathanga kunye nemisipha engundoqo. Njengoko ixesha lihamba, kwaye ngokusebenza, ukwenza i-spin i-spin kuya kuba lula kwaye kulula ukuba i-skater.
Xa ungena kwindawo yokuhlala ujikeleze kwiqhwa, i-skater kufuneka ihambe kwinqanaba elomeleleyo nelinzulu elingaphandle langaphandle. I-kneing knee kufanele iguqe phambili ngokujulile. Emva koko, i-skater kufanele iguquke kwi-"position twisted". Ukuguqula umlenze wamahhala uhamba ngokulandelayo.
Umzobo wee-skaters unokomeleza imisipha yabo yomlenze ngokuqala ukugoba phantsi nje kuphela xa beziva bekhululekile. Kwakhona kubalulekile ukunyuka ngokukhawuleza. Ukwenza lo msebenzi, ngokuphindaphindiweyo, kuya kunceda umnqweno we-skaters ukuhlala kwindawo yokuhlala.
Ngethuba lokuphambana, kucetyiswa ukuba i-skater ihlale phambi kwendawo yokukhwela kunye, ngexesha elifanayo, udonsa isisu esiswini nzima.
Ukuba isisindo sihlaselwa esithende ngexesha lokuhlala, i-skater iya kuwa.
Umzimba ophezulu awufanele uphonywe ngaphandle kokuba i-skater yenza indawo yokutshintsha emva kokuba ephethe i-basic spin. Xa abalingisi bokuqala bafunda i-spin bahlala, kufuneka bajonge njengokuba behlala behlala behlaziyekile ngexesha lokuhamba.
Hlaziya xa uhlala uhlala.
Kukulungele ukuqhuba ukujikeleza kwindawo yokudibanisa kwiinyawo ezimbini. Ukwenza njalo kuya kunceda ukuqinisa imisipha yomlenze kunye namadolo.
Ukuba awukwazi ukuphakama kwelinye ilanga ngokukhupha phambili ngokugqithiseleyo kwi-kneing knee, kulungile ukutshitshisa umlenze we-skating ngesinye okanye zombini ngezandla ukuzityhutyha xa usebenza ukuqonda ukuhlala kwindawo yokuhlala.
Oluthe xaxa malunga nokuHluma kwiiSikhu zeSiqhwa:
Indlela yokwenza isiseko esisisiseko seenyawo ezichanekileyo kwi-Skate Skates
I-Skaters Spin Fast?
Izikhwama zakho zamanani kunye namacwecwe afanelekileyo okutshintshisa kwiqhwa, kunokuba kubalulekile ukuba iikhredti zokuqashisa zifumaneke.
Izifundo ezizimeleyo ezivela kumqeqeshi oqeqeshwayo wokukhwela umdlalo unokukunceda ukwazi ukuba uhlale uhlala.
Ukuqala i-Cheerleading Squad
I-Presta Valve - Yintoni i-Presta Valve?
Ixesha leeTe? Ixesha leTe liSebenza?
Ndingayifumana Njani Indawo Yesikhundla?
Ziziphi iintlobo ze-Skateboarding?
Imigomo yokuLuleka kweSiqhwenga seSiqhelo ngasinye seSikhathi ngasinye kufuneka siyazi
Ukusebenzisa iiNgcinethi njengeNouns
Imidlalo yeVidiyo ifuthe ukusebenza kweBrain
Kuthetha ntoni "iHedonic" kwiNgqiqo yezoQoqosho?
Funda ukuba Kutheni abanye abasebenzayo beqhelana nokutya
Nantsi indlela iJamani elibhiyozela ngayo iKarnival
5 Abadlali baseMelika baseMelika abavela kwiindawo ezivela ku-Adam Beach ukuya eGraham Greene
Iziyobisi ngokugqithiseleyo kwiNtsana efile
Ngo-1966 I-Mustang Model Year Profile
Iingozi zeLeb kunye neBabe
UJeff Dunham - I-Biography
Sebenzisa i-Fuel Stabilizer kwi-Winter Storage Car
10 Amanqaku Awakhe Wawazi NgoPhakamileyo (1978)
Indlela yokutshintsha iPasipoti yaseCanada elahlekileyo okanye ebiwe
Ukwahlukana Phakathi Kokubambisa Okwebini kunye Nokusebenza Kwamanye Okwenza Ubhaka